Hearts' Ease Beauty Spa | မြန်မာ အလှအပ လမျးညှနျ Myanmar Beauty Guide Drecome Beauty
Hearts' Ease Beauty Spa | Mayangone
Hearts' Ease Beauty Spa
Hearts' Ease Beauty Spa ဆိုင်လေးကတော့ အမှတ် 65 ဒီ၊ နဂါးရုံးကျောင်းလမ်း၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ မရန်းကုန်းမြို့ နယ်မှာ ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။
ဒီဆိုင်လေးမှာတော့ body and facial massage, oil massage, hair design and treatments, reflexology, pedicure, manicure, sauna , nail arts, eye brow tattoo စတဲ့ ၀န်ဆောင်မှု့ မျိုးစုံကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုင်းနည်းပညာကို အသုံးပြုထားတဲ့ Massage ကတော့ လူသိများပါသည်။ ကောင်းမွန်သော ၀န်ဆောင်မှု့ များကြောင့် High Class များနှင့် ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင်များ အများဆုံး လာရောက်အားပေးသော ဆိုင်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးသီးသန့် ဆိုင် လေးဖြစ်ပါသည်။ ဆိုင်ဖွင့်ချိန်ကတော့နေ့ စဉ် မနက် ၁၀ နာရီ မှ ည ၇နာရီ ခွဲ အထိဖြစ်ပါသည်။
10:00 AM - 07:30 PM ( ဘာမှမရှိပါ )
No 65 D, Nagar Yone Kyaung Street, Gabar Aye, Mayangone Township, Yangon
အနီးအနား Kyauk Myat Bus Stop မှတ်တိုင်3မိနစ် လမ်းလျှောက်လျှင် ကြာချိန်
Hearts' Ease Beauty Spa Hearts' Ease Beauty Spa is located at No 65 D, Nagar Yone Kyaung Street, Gabar Aye, Mayangone Township, Yangon for many years. The Spa provides numerous kinds of services including body and facial massage, oil massage, hair design and treatments, reflexology, pedicure, manicure, sauna , nail arts, eye brow tattoo and much more. The Spa offers Thailand technique for all massage services. The Spa is very well-known among famous celebrities and high class people for their very best services. Member card are available for more discount up to 20%. The Spa is for ladies only. Opening Hours is 10:00 AM - 07:30 PM for all days.
Ever Green Beauty Salon
Hair Saloon, Nail
Remy Hair By Fancy House
Nilar Beauty Center 2
Gamone Pwint Center (Kabaraye) Beauty Corner First Floor